दुʼघटʼ नामा दुखद निʼधन भयका नायिका महिमा र सर्मिलाको घरमा वेलुका पुग्दा रुवाʼबासी (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
दुʼघटʼ नामा दुखद निʼधन भयका नायिका महिमा र सर्मिलाको घरमा वेलुका पुग्दा रुवाʼबासी (भिडियो सहित)
काठमाडौं- सवारी दुʼर्घटनामा परी नायिका महिमा सिलवालको निधन भएको छ । काठमाडौंबाट चितवन जानेक्रममा उनी सवार बा ९८ प ७०५८ नम्बरको स्कुटरलाई लु २ ख १३५ नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा सिलवालको घटʼनास्थलमै निʼधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुघटʼ नामा ग म्भीर घाइʼते भएकी उनकी बहिनी सर्मिलाको पनि ज्या न ग एको छ । चितवन जिल्लामा बहिनीको ‘इन्गेजमेन्ट’मा जान लागेको बेला दुर्घ टना भएको थियो ।
दिदी महिमाको घटनास्थलमै र बहिनीको उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउनेक्रममा बाटोमै निधʼन भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना बुधबार साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा गजुरी गाउँपालिका, वडा नम्बर २ चाम्बासमा घटेʼको हो।
प्रहरी निरिक्षक पाण्डेका अनुसार घुम्ती क्रस गर्ने क्रममा स्कुटी र बस एकआपसमा ठोʼक्किएका हुन्। उनले बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका–१२ शिवनगरकी अभिनेत्री महिमा सिलवालले एक दर्जनभन्दा बढी फिल्म र दर्जनौं म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन् । ‘कारवाही’ फिल्मबाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी उनले ‘जिगोलो’, ‘अप्रिल फूल’, ‘दानव’ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् । उनी अभिनीत अझै आधा दर्जन फिल्म प्रदर्शनको पखाईमा छन् ।
जुन घरमा केहि दिनमा बहिनीको बिवाह हुँदै थियो आज त्यहि घरमा दुइ छोरिको निʼधन भएको छ । एउटा छोरीलाई डोली चढाएर पठाउन लाग्दै गर्दा दुइ छोरीलाई चि”तामा राखेर घा”ट लानु पर्दा परिवार त सोकमा त थियो नै पुरै सिंगो बजार पनि सोकमा थियो ।
तलको भिडियो हेर्नुहोस्….
Prevयी चेली जसको स्वरमै जादु , तर नेपाल आइडलको मंचबाट बाहिरिन (भिडियो सहित)
Nextआजको राशिफल : बि.स.२०७६ साल फागुन २ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० फेब्रुवरी १४ तारीख
वैशाख २६ गते (मई ०८ तारिख) मंगलबारको “मेरीबास्सै” हेर्नुभयो ? नहेरेको भए तलको ताजा भिडियो हेर्नुस
एकपल्ट अवश्य हेर्नुहोला। एउटी मुस्लिम समुदायबाट अगाडी बढेकी चेलीको यति ठुलो योगदान देश बिकासको लागी ! (भिडियो सहित)
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो। साउदी, कतार, दुबई ,मलेसिया आज कुन देशको पैसाको भाउ कति ?
जपानी प्रधानमन्त्रीले दिए प्रधानमन्त्रि ओलिलाइ खुसिको खबर ! सारा नेपाली खुसी पार्ने घोषणा